Khabiir Kala Duwan: Hagaha Si Looga Hortago Google Ka Dhaqso Wadiiqooyinka Qadiimiga ah
Marka internetkaagu koro, waxaad isku dayi doontaa sida ugu fiican ee aad u heli karto si aad u hagaajisid aragtida iyo kalsoonaanta internetka. Mararka qaarkood, saameynta sida goobahayagu u shaqeyn jireen ayaa ah kuwo ka dambeeya, taasina waa halka aan u fiirsan lahayn.
Hoos u soo qaado talooyinka soo socda Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamiilka Kaabis , si looga hortago Google in uu ku mashquulo goobo hore.
Sannado yar ka hor, mid ka mida macaamiishayda ayaa ii sheegay in uu lahaa website-ka e-commerce. Waxaa isbedeley isbeddelada kala duwan: laga soo bilaabo qaab-dhismeedka URL-ka si loo galo bogaga, wax waliba waa la bedelay si loo dhigo goobta muuqata - barum ruote.
Macaamiil wuxuu ogaaday isbeddellada ku yimid Isku-shaandhaynta Raadinta ee Google wuxuuna helay khaladaadka Taraafigga ah. Waxa uu arkay inuu jiro tiro badan oo ka mid ah URL-kii hore iyo kan cusub oo abuuray taraafic been abuur ah. Qaar ka mid ah, si kastaba ha ahaatee, waxay muujinayaan Helitaanka Diidmada 403 iyo Ma helin 404 khaladaadka
Macaamiilkaygu wuxuu ii sheegay in dhibaatada ugu weyn ee uu lahaa uu ahaa khariidadii hore ee jirtey ee ku jira diiwaanka xididka. Websaytka wuxuu isticmaalay noocyo badan oo ka mid ah Google Plugins-ka YouTube-ka hore, laakiin hadda wuxuu ku tiirsanaa WordPress SEO by Yoast ee bogaga. Nidaamyada kala duwan ee ilaha hore loo adeegsaday, si kastaba ha ahaatee, waxay u abuurtey feejignaan isaga. Waxay ku jireen faylka xididka oo loo yaqaan sitemap.xml.gz. Tan iyo markii uu bilaabay isticmaalka fiilooyinka Yoast ee lagu abuurayo sitemaps dhamaan posts, bogagga qaybaha iyo tags, uma uusan u baahneyn fiilooyinkaas. Nasiib darro, qofku ma soo gudbinin bogga..si aad u heshid ereyga 'Search Console'. Waxa kaliya oo uu soo gudbiyay boggiisa boggiisa, Google-da wuxuu isku dayey in uu sii daayo boggiisa hore.
Maxaa la raadinaya?
Qofka ma uusan tirtirin bogaga hore ee laga soo diro faylka rootiga, sidaas oo kale ayaa sidoo kale lagu heley. Waxaan ku soo laabtay isaga oo ii sharxay in khariidadda bogagga ay tahay kaliya soo jeedin ah waxa la rabo in lagu dhexdhexaadiyo search engine natiijooyinka. Waxaad u maleyneysaa inaad tirtirto boggaga hore ee Google in ay joojiso google-ka si ay uugu dhejiso URLka aan caadiga ahayn, laakiin taasi run maaha. Khibradeyda ayaa waxay leedahay in Google isku dayayo in uu tuso URL kasta oo qadiim ah dhowr jeer maalintii, isagoo hubinaya in khaladaadka 404 uu yahay mid dhab ah oo aan ahayn shil.
Googlebot wuxuu ku kaydin karaa xasuusta xiriiryadii hore iyo kan cusub ee ay ka heli karto bogga boggaaga. Waxay booqan kartaa website-kaaga wakhti caadi ah, inaad hubiso in bog kasta uu si sax ah u muuqdo. Googlebot wuxuu isku dayaa inuu qiimeeyo haddii xiriirada ay yihiin kuwo sax ah ama aan waxba galabsan si ay martida ula kulmaan wax dhibaato ah
Waa iska cadahay in dadka websaydhku ay jahwareerayaan marka ay tiradoodu ay sii kordheyso. Dhammaantood waxay doonayaan inay hoos u dhigaan ilaa xad. Sidee Google ku wargalineysaa in la iska iloobo dhammaan boggaga hore? Waxaad sidaas samayn kartaa adigoo dilaya dhammaan kuwa aan la rabin, iyo khariidadda khariidaduhu waxay ku socdaan. Markii hore, habka keliya ee suurtogalka ah ee suurtagal ah ayaa ahaa faylasha .htaccess. Mahadsanid WordPress si aad noogu siiso qaar ka mid ah fiilooyinka
Website-yada WordPress waxay leeyihiin faylkan oo ku jira faylasha asaasiga ah. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad galiso FTP oo aad awood u hesho faylasha qarsoon ee cPanel. Tag rugta Faylka Wareejinta si aad u saxo faylkan sida baahidaada. Waa inaadan illoobin in edebta ay si khalad ah u waxyeeleyn karto goobtaada, markaa waa inaad had iyo goor kaydisaa dhammaan xogtaada
Markaad ku dhejisid faylka faylka, dhammaan URL-yada la soo dhaafay waxay ka baabi'i doonaan qaladkaaga Crawl-ka waqti aan waqti lahayn. Waa inaadan iloobin in Google uu doonayo in aad ku noolaato goobtaada, hoos u dhigista fursadaha 404 khaladaadka.